FAQ - द्रुत उत्तर - Avalanches.com | भुटान ne BT
FAQ पन्ने Avalanches.com | भुटान
१. दर्ता। म कसरी खाता सिर्जना गर्न सक्छु?
खाता सिर्जना गर्न पृष्ठको माथिल्लो दाहिने कुनामा "सेटिंग्स" आइकनमा वा "समाचार सिर्जना गर्नुहोस्" आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को, तपाईले पप-अप विन्डो देख्नुहुनेछ जसमा तपाईले नयाँ खाता सिर्जना गर्न "रेजिस्टर" मा क्लिक गर्नुहुनेछ वा तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ यदि खाता पहिले नै सिर्जना गरिएको हो भने। रेजिष्ट्रेसन विन्डोमा, देश कोड वा तपाईंको ईमेल ठेगानाको साथ मान्य मोबाइल फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसो भएपछि एउटा अद्वितीय पासवर्डको साथ आउँनुहोस् र पुन: कन्फर्मेसनको लागि प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईं फेसबुक वा गुगल खाताहरू प्रयोग गरेर पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि "दर्ता" विन्डोमा पासवर्ड प्रविष्टि क्षेत्रहरू अन्तर्गत चाहिएको स्रोत प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्। साइटले स्वतः चयनित खातामा तपाईंलाई पुनःनिर्देशित गर्दछ। तपाइँको लगईन यकिन गर्नुहोस् र तपाइँ दर्ता गरिएको प्रयोगकर्ताको रूपमा Avalanches.com मा फर्कनुहुनेछ।
प्रविष्ट गरिएको डाटाका लागि आवश्यकताहरू।
१.१। मोबाइल फोन नम्बर वा ईमेल।
फोन नम्बर जुन तपाईं दर्ताका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ व्यक्तिगत र सजिलैसँग उपलब्ध हुनुपर्दछ। देशको कोडमार्फत यसलाई + (उदाहरण +१ (शहर / अपरेटर कोड) (नम्बर) को साथ प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो नम्बरले तपाईंको हिमस्खलन खाता, प्लेटफर्म परिवर्तनहरू, आदिमा सुरक्षा उपायहरूको बारेमा सन्देशहरू प्राप्त गर्दछ।
कृपया रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियामा तपाईंको व्यक्तिगत सक्रिय ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि हिमलेन्सबाट सबै सूचनाहरू तपाईंले निर्दिष्ट गर्नुभएको ईमेलमा पठाइनेछ। साथै, यदि तपाईंको पासवर्ड हराइरहेको छ वा बिर्सिएको छ भने, हामी तपाईंको पंजीकृत ईमेल ठेगानामा यसलाई कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने निर्देशनहरू पठाउनेछौं।
बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। बहुविध साइटहरू, प्लेटफर्महरू, वा खाताहरूमा समान पासवर्ड प्रयोग नगर्नुहोस्। एक पासवर्ड हराउनु, जुन अन्य प्रोफाइल वा प्लेटफर्महरू बीच साझेदारी गरिएको छ, एक ह्याकरमा सबै सम्बन्धित खाताहरूको पहुँच गुमाउन सक्छ।
कसैसँग तपाइँको पासवर्ड साझा नगर्नुहोस्। तपाईको पासवर्ड कत्तिको बलियो छ भन्ने कुरालाई फरक पार्दैन, यदि कसैलाई थाहा छ भने, यो अब सुरक्षित हुन सक्दैन।
हिमस्खलनले कहिले ईमेलहरू, SMS वा तपाईंको खातामा पासवर्ड अनुरोधको साथ कलहरू पठाउँदैन। तपाईको खाता बनाउने क्रममा, पासवर्ड छनौट गर्न नबिर्सनुहोस् जुन कम्तिमा १० वर्ण लामो हुन्छ, अपर र लोवर केस वर्णहरू र संख्याहरू सहित। यस तरिका बाट तपाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट तपाईको खातालाई तपाईको खाताको सुरक्षा गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाईं आफ्नो मोबाइल नम्बर वा ईमेल ठेगाना थप्नुहुन्छ र पासवर्ड सिर्जना गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई निर्दिष्ट फोन नम्बर / ईमेलमा तपाईंको एसएमएस वा ईमेल पठाउनेछौं तपाईंलाई दर्ता पक्का गर्नको लागि सोध्न। तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको सन्देशमा, "कन्फर्म" बटन क्लिक गर्नुहोस्। प्रणालीले तपाईंलाई मुख्य हिमस्खलन पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। तपाईं अब आफ्नो दर्ता गरिएको फोन नम्बर / ईमेल र व्यक्तिगत पासवर्डको साथ आफ्नो प्रोफाइलमा लग इन गर्न सक्नुहुनेछ।
१.3। म कसरी सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गरी खाता दर्ता गर्न सक्छु?
तपाईं फेसबुक वा गुगल प्रयोग गरेर तपाईंको खाता दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि, दर्ता गर्दा, व्यक्तिगत डेटा प्रविष्ट गर्नुको सट्टा, चयनित सामाजिक नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। साइटले तपाईंलाई यस नेटवर्कको मुख्य पृष्ठमा निर्देशित गर्दछ, जहाँ तपाईं आफ्नो दर्ता पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
२.१। तपाईको खातामा पहुँच पुन: स्थापित गर्दै।
२.१.१। मैले ईमेल ठेगानामा पहुँच गुमाएँ जुन मैले मेरो प्रोफाइलको साथ दर्ता गरें।
एउटा अप-टु-डेट ईमेल ठेगाना मुख्य खाता हो जुन तपाईले लिन सक्नुहुन्न तपाईको खातामा कहिले पनि पहुँच हराउने छैन। आवधिक रूपमा तपाईको खातासँग सम्बन्धित सम्पर्क जानकारीको प्रासंगिकता जाँच गर्नुहोस् र आवश्यक अनुसार यसलाई अद्यावधिक गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खातामा लग इन गर्न वा हिमस्चलन टोलीसँग सम्पर्क हराउन नसक्दा समस्यालाई बचाउनेछ।
२.१.२ मैले मोबाइल नम्बरमा पहुँच गुमाएँ जुन मैले प्रोफाइल दर्ता गरें।
२.१.।। मैले एउटा सामाजिक नेटवर्क को प्रयोग गरी प्रोफाइल दर्ता गर्‍यो, तर मैले त्यहाँ खाता हटाएँ।
२.२। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको प्रोफाइल ह्याक गरिएको छ।
तपाईंको प्रोफाइलमा सम्झौता गरिएको छ कि भनेर प्रमाणित गर्न, यी कथनहरू जाँच गर्नुहोस्:
- तपाइँको तर्फबाट प्रविष्टि र टिप्पणीहरूको एक उपस्थिति, जुन तपाइँले गर्नुभएन;
- अज्ञात लिंक समावेश सन्देश मेरो तर्फबाट पठाइएको थियो, मेरो प्रोफाईल द्वारा शंकास्पद सामग्री सिर्जना गरिँदै;
- तपाईंको प्रोफाईलले नयाँ सदस्यता बनायो, सदस्यता रद्द गर्‍यो वा पृष्ठहरू र प्रयोगकर्ताहरू रोक्न तपाईंले अनुमोदन गर्नुभएन; तपाईंले आफ्नो खाता ह्याक हुने बारे अज्ञात व्यक्तिहरूबाट सूचना प्राप्त गर्नुभयो;
- हिमस्खलनले तपाईंलाई तपाईंको खाता जानकारी परिवर्तन हुँदैछ भनेर सूचनाहरू पठाएको छ, तर यो तपाईंको सहमति बिना भयो;
- तपाईंको हिमस्चेस खातामा लगईन गर्दा, तपाईंले पाउनुभयो कि तपाईंको पासवर्ड अब काम गर्दैन, यसलाई रिसेट गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। यदि कम्तिमा कथन मध्ये एक कथन तपाइँको अवस्थाको सम्झना दिलाउँदछ भने, तपाइँले निम्न गर्नु पर्छ:
१. तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। पासवर्ड रिसेट फारमबाट एक ईमेल अनुरोध गरेर तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्। तपाईंको खातासँग सम्बन्धित ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पासवर्ड रिसेट सन्देशको लागि जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो पासवर्ड रिसेट गरे पछि लग ईन गर्नुभयो भने, तपाईंको खाता ह्याक गरिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन विचार गर्नुहोस्।
२. समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईं अझै लग ईन गर्न सक्नुहुन्न भने, समर्थन सेवामा अनुरोध पठाउनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् ईमेल खाता वा मोबाइल फोन नम्बर जुन तपाईंले आफ्नो खाता दर्ता गर्दा प्रयोग गर्नुभयो। हामी निर्दिष्ट सम्पर्क जानकारी को लागी अगाडि निर्देशनहरू पठाउनेछौं।
२.3 प्रवेशसँग मद्दत गर्नुहोस्।
२.3.१ म प्रोफाइलमा लग इन गर्न प्रयास गर्दै छु तर त्रुटि सन्देशहरू पाउँदै छु।
गलत मोबाइल फोन नम्बर, ईमेल, वा पासवर्डले तपाईंको समस्या निम्त्याउन सक्छ। हिज्जे र यो डाटा को प्रासंगिकता जाँच गर्नुहोस्। सायद तपाईले आफ्नो सम्पर्क जानकारी वा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभयो तर लामो समय अघि यस बारे बिर्सनुभयो।
अवरोध गरिएको इन्टरनेट जडान पनि लग ईन गर्ने तपाईंको बाटोमा हुन सक्छ। नेटवर्कमा तपाईंको जडान जाँच्नुहोस्। यदि समस्या बाँकी छ भने, कृपया हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
२.3.२ मलाई दर्ता पुष्टि गर्न मद्दत चाहिन्छ।
यदि रजिष्ट्रेसनको पुष्टिकरणको बारेमा सन्देश ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बरमा आएको होईन जुन तपाईंले सम्पर्कको रूपमा संकेत गर्नुभयो भने कृपया निर्दिष्ट डाटाको शुद्धता जाँच गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा फेरि पुष्टिकरण अनुरोध पठाउनुहोस्। यदि पत्र दोस्रो अनुरोध पछि तपाइँसम्म पुग्न सकेन, कृपया हिमस्खलन समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
1.१ बिर्सिएको वा हराएको पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्।
लगइन पृष्ठमा, "तपाईंको पासवर्ड बिर्सनुभयो" मा क्लिक गर्नुहोस्?
ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, जसको साथ तपाईंको प्रोफाइल दर्ता गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल वा मोबाइल फोन जाँच गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई तुरून्त निर्दिष्ट सम्पर्क डाटाको लागि पासवर्ड रिकभरी कोड पठाउनेछौं। यदि कोड आएको छैन भने, प्रविष्ट गरिएको डाटाको शुद्धता जाँच गर्नुहोस् र "पठाउन पुनःप्रयास गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्।
लगइन विन्डोमा यो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
नयाँ पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्। प्रविष्ट गरिएको पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्।
2.२ पासवर्ड परिवर्तन अनुरोध गरेपछि मैले सन्देश प्राप्त गरेन।
तपाईंले गलत ईमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बर निर्दिष्ट गरेको हुनसक्दछ। हिज्जे जाँच गर्नुहोस्। तपाईं पुरानो व्यक्तिसँग लग इन गर्न को सट्टा तपाईको डेटा अद्यावधिक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि समस्या रहिरहेमा, कृपया समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Email. ईमेल र मोबाइल नम्बर
1.१। ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाईको इ-मेल परिवर्तन गर्नका लागि तपाईले "सामान्य" कोटिमा सेटिंग्समा जानु आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि ईमेल सेटिंग्समा पुरानो इ-मेल ठेगानालाई नयाँमा परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसो भए, "परिवर्तन गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं पुरानो ठेगानामा ईमेल ठेगाना परिवर्तनको बारेमा सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रक्रियाको साथ अगाडि बढ्नको लागि, तपाईंले यसलाई ईमेलमा "जानुहोस्" बटन क्लिक गरेर पुष्टि गर्नुपर्नेछ। यसलाई उपेक्षा गर्नुहोस् यदि तपाईंले आफ्नो ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न अनुरोध सबमिट गर्नुभएको छैन भने। केही मिनेटमा, परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
2.२ तपाईको मोबाईल फोन नम्बर परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाईको खातामा जोडिएको मोबाईल नम्बर परिवर्तन गर्नका लागि तपाईले "सामान्य" वर्गमा सेटिंग्समा जानु पर्छ, त्यसपछि "फोन" स्तम्भमा, पुरानो नम्बरलाई नयाँमा परिवर्तन गर्नुहोस्। जानकारी अपडेट गरे पछि "परिवर्तन गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं पुरानो नम्बरमा परिवर्तनको बारेमा ईमेल सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रक्रियाको साथ अगाडि बढ्नको लागि, तपाईंले ईमेल सूचनामा "जानुहोस्" बटन क्लिक गरेर यसलाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् यदि तपाईंले आफ्नो फोन नम्बर परिवर्तन गर्न अनुरोध पेस गर्नुभएको छैन। केही मिनेटमा, परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
3.। मलाई मेरो ईमेल ठेगाना प्रमाणित गर्न मद्दत चाहिन्छ।
तपाईको इ-मेल पुष्टि गर्नका लागि तपाईले अन्तिम मेलबक्समा जानु आवश्यक छ जुन तपाईले आफ्नो खातामा लि linked्क गर्नु भएको छ र "गो" बटन क्लिक गर्नुहोस्। स्प्याम इनबक्स जाँच गर्नुहोस्, यदि तपाईंले ईमेल फेला पार्न सक्नुहुन्न भने। तपाईंको ईमेल अब प्रमाणित भयो।
4.। मैले आफ्नो ईमेल / मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरें, तर जानकारी पुरानो डेटामा आउँदछ।
सम्भवतः तपाईले नयाँ सम्पर्क जानकारीको पुष्टि गर्नु भएन। यो पनि सम्भव छ कि नयाँ ईमेल ठेगाना वा मोबाइल फोन नम्बर गलत तरिकाले प्रविष्ट गरिएको थियो। यदि तिनीहरू सहि छन् भने जाँच गर्नुहोस् र फेरि अपरेशन दोहोर्याउनुहोस्।
.1.१। केको लागि प्रमाणिकरण हो?
प्रमाणिकरण प्रयोगकर्ताको डेटाको शुद्धता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया हो।
सामाजिक नेटवर्कमा खाता दर्ता गर्दा, कार्यक्रमले प्रयोगकर्तालाई उसको / उनको पहिचान र वास्तविक अस्तित्व पुष्टि गर्न प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जान प्रेरित गर्दछ। यसैले, प्रणाली नक्कली खाताहरू वा बट्सको उपस्थिति विरूद्ध पुन: लगाईन्छ र अर्को व्यक्तिको तर्फबाट कुनै पनि मिडिया गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्दैन।
प्रमाणिकरण एक सामान्य मानक प्रक्रिया हो। यसको उद्देश्य नैतिक र कहिलेकाँही आर्थिक वा राजनैतिक मान्यताहरू सुनिश्चित गर्नु हो।
.2.२। कुनै पुष्टिकरण SMS छैन।
यदि तपाईंले आफ्नो फोन नम्बर सहि प्रविष्ट गर्नुभयो भने जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको अनुरोध पुन: बुझाउनुहोस् यदि नम्बर गलत छ। यदि समस्या समाधान गरिएको छैन भने, योग्य सहायताका लागि समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Personal. व्यक्तिगत प्रोफाइल सेटिंग्स
.1.१। प्रोफाइल फोटो लोड गर्दै।
तपाईंको प्रोफाइल फोटो अपलोड गर्न, तपाईंले आफ्नो खाता सेटिंग्स खोल्न आवश्यक छ। सेटि page पृष्ठको बाँयामा, फोटो अपलोड गर्नका लागि एक गोल विन्डो छ, जसमा तपाईले आफ्नो तस्विरलाई ड्र्याग र ड्र्याग गरेर तपाईंको ग्याजेटको फोल्डरबाट वा साधारण छवि अपलोडद्वारा राख्नु पर्छ।
.2.२। म कसरी मेरो प्रोफाइल यूआरएल परिवर्तन गर्न सक्छु?
प्रोफाइल यूआरएल परिवर्तन गर्नका लागि तपाईले सेटिंग्समा जानु पर्छ, त्यस पछि "प्रोफाइल यूआरएल" स्तम्भमा, सक्रिय रिसोर्स पोइन्टरलाई नयाँमा परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसो भए, "परिवर्तन गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू छिट्टै लागू हुनेछन्।
.3.।। म कसरी मेरो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न सक्छु?
प्रयोगकर्तानाम परिवर्तन गर्न तपाईले सेटिंग्समा जानु आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि "तपाईंको नाम र थर" स्तम्भमा, सक्रिय नामलाई नयाँमा परिवर्तन गर्नुहोस्। "परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू छिट्टै लागू हुनेछन्।
.4.।। म कसरी मेरो प्रोफाइल भाषा परिवर्तन गर्न सक्छु?
प्रयोगकर्तानाम परिवर्तन गर्नका लागि तपाईले सेटि toमा जानु आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि "भाषा" स्तम्भमा प्रस्तावित व्यक्तिको सूचीबाट आवश्यक भाषा छान्नुहोस्। "परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू छिट्टै लागू हुनेछन्। पृष्ठ र प्रोफाइल स्वचालित रूपमा आवश्यक भाषा सेटिंग्समा अपडेट हुनेछ।
.5.। म कसरी आफ्नो प्रोफाइलको देश र शहर परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाइँ "व्यक्तिगत" स्तम्भमा तपाइँको व्यक्तिगत प्रोफाइल सेटिंग्स को माध्यम बाट आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आवश्यक देश र शहर चयन गर्नुहोस् र "परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्।
.6.।। म कसरी मेरो प्रयोगकर्ता लि ?्ग परिवर्तन गर्न सक्छु?
तपाईको प्रयोगकर्ता प्रोफाइलको लि change्ग परिवर्तन गर्न तपाईले "अतिरिक्त" कोटीमा सेटिंग्समा जानु आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि "लिंग" स्तम्भमा आवश्यक विकल्प छनौट गर्नुहोस्। "Save" क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू केहि मिनेटमा प्रभावी हुनेछ।
7.7 म कसरी प्रयोगकर्ताको जन्म मिति परिवर्तन गर्ने?
प्रयोगकर्ताको लि change्ग परिवर्तन गर्नका लागि तपाईले सेटिंग्समा जानु पर्छ र "अतिरिक्त" कोटी खोल्नु पर्छ, त्यसपछि "जन्म मिति" स्तम्भमा इच्छित मिति प्रविष्ट गर्नुहोस्। "परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू छिट्टै लागू हुनेछन्।
8.8 म कसरी प्रयोगकर्ता पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्छु?
प्रयोगकर्ता पासवर्ड परिवर्तन गर्न तपाईले सेटिंग्समा जानु पर्नेछ र "अतिरिक्त" कोटी खोल्नु पर्छ, त्यसपछि "पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्" स्तम्भमा नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। "परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्। यी परिवर्तनहरू छिट्टै लागू हुनेछन्। अर्को पटक तपाईको खातामा लग इन गर्नुहोस्, तपाईले नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
.1.१। म कसरी सूचनाहरू व्यवस्थापन गर्ने?
हिमस्खलनसँग अधिसूचनाहरूको कालक्रम छ जुन तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेर जाँच गर्न सजिलो तरिका प्रदान गर्दछ र उनीहरूले कसरी तपाईंसँग कुराकानी गर्छन्। अधिसूचना समयरेखाले तपाइँको कुन पोष्टलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूले मनपराउँदछ भनेर देखाउँदछ, साथै तपाईंको नयाँ सदस्यताहरू र तपाईंको पोष्टहरूमा प्रतिक्रियाहरू। तपाईको हिमस्खलन सूचनाहरू जाँच गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्: घडी आइकन मार्फत काम गर्ने प्यानलको माथिल्लो दाहिने कुनामा र मुख्य प्रोफाइल मेनूबाट। तपाई घण्टी बटनमा क्लिक गरेर खुला सूचनाहरू लुकाउन सक्नुहुन्छ।
.2.२। म कसरी सूचनाहरू बन्द गर्ने?
तपाईं आफ्नो सामग्री, सामाजिक गतिविधि अपडेट, र तपाईंको प्रोफाइल को उल्लेख को रूपमा ईमेल सूचनाहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै सूचना पत्रको तलको "सदस्यता रद्द गर्नुहोस्" लिंक क्लिक गरेर। मुख्य प्यानलमा घंटी प्रतिमामा क्लिक गरेर तपाईं अन्य अन-स्क्रिन अन्तर्क्रिया सूचनाहरू (सदस्यता, मनपर्ने, टिप्पणीहरू) लुकाउन सक्नुहुन्छ।
.3.।। ईमेल सूचनाहरू। तपाईंले आफ्नो ईमेल ठेगाना, पासवर्ड, सामग्री, सामाजिक गतिविधि अपडेट, र उल्लेख परिवर्तनको बारेमा ईमेल सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
* जब प्रयोगकर्ताले तपाईंको खातासँग सम्बन्धित ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्दछ, हामी हालको ईमेलमा सूचना पठाउनेछौं जुन सम्पर्क जानकारीको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईंको खातामा सम्झौता भयो भने, यी अलर्टहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्रोफाइलको अधिकार दावी गर्न कदम चाल्न मद्दत गर्दछ।
.4.।। SMS सूचनाहरू।
एक मात्र पटक तपाईले एसएमएस अधिसूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बखत, प्रोफाइलको फोन नम्बर परिवर्तन भएको बेला, र पासवर्ड परिवर्तन गर्दा। सामग्री र सामाजिक गतिविधि अपडेटहरू, साथ साथै तपाईंको प्रोफाइलको कुनै पनि उल्लेखहरू तपाईंको फोन नम्बरमा पठाइने छैन।
.1.१ म कसरी समूह बनाउने?
यो सजिलो छ, केवल साथ पछ्याउनुहोस्। पहिले तपाईको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् उपलब्ध प्रयोगकर्ता विकल्पहरू हेर्नका लागि। फेरी स्क्रिनको देब्रेपट्टि विकल्पहरूको सूचीमा "समूह बनाउनुहोस्" को लागी हेर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले नयाँ ब्यानर देख्नुहुनेछ जुन समूह सुविधाको छोटो वर्णन समावेश गर्दछ। "समूह बनाउनुहोस्" पाठको साथ निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँको नयाँ समुदाय को निर्माण जारी गर्न को लागी, प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल प्रमाणित गर्नु पर्छ। द्रुत फोन प्रमाणिकरणमा अगाडि बढ्नुहोस् यदि तपाईंसँग पहिले नै छैन भने। अब केवल तपाईंको समूहको नाम, छोटो वर्णन, र एक वेबसाइट सिर्जना गरिएको समुदायको सम्बन्धमा खाली समूह जानकारी भर्नुहोस्। "समूह नाम" बाहेक सबै क्षेत्रहरू वैकल्पिक हुन्। तपाईं जहिले पनि अपडेट गर्न वा तपाईंको समूहको सबै जानकारीहरू पुन: लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको पहिलो समूह को निर्माण को बधाई छ!
.2.२ के म धेरै समूहहरू सिर्जना गर्न सक्छु?
अवश्य! तपाईको प्रोफाइल प्रमाणित नभएसम्म धेरै समूहहरूको सिर्जनामा कुनै समस्या छैन।
.3..3 समूह अपडेटहरू कहाँ प्रदर्शित हुन्छन्? तपाइँ "मेरो फिड" मा वा समूहको पृष्ठ ब्राउज गरेर सदस्यता लिईएका समूहहरूका अद्यावधिकहरू फेला पार्नुहुनेछ।
.4..4 समूहहरू कहाँ म प्रदर्शनको सदस्य हुँ?
तपाईले सदस्यता लिनु भएको समूहहरू अवलोकन गर्न तपाईको प्रोफाइल खोल्नुहोस्, तपाईंको स्क्रिनको बाँया सुविधाहरूको सूचीबाट "सदस्यताहरू" मा क्लिक गर्नुहोस् (उही सूची जहाँ तपाइँले "समूह बनाउनुहोस्" सुविधा हेर्नुभयो)। त्यहाँ तपाईंले स्क्रिनको शीर्षमा अवस्थित हिमस्खलन खोजी पट्टी मुनि "प्रेस" फेला पार्नु पर्छ र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ! तपाईंको समूहहरू सबै "प्रेस" सेक्सनमा सूचीबद्ध छन्।
.5..5 के समूहमा पोष्ट गर्नु भनेको नियमित सामग्री पोष्ट गर्नु भन्दा फरक छ?
होईन, प्रक्रिया हिमस्चेस प्लेटफर्ममा नियमित सामग्री सिर्जनासँग मिल्दोजुल्दो छ, तर यसमा एक नयाँ सुविधा छ: समूहको पोष्टहरू व्यवस्थित गर्न मद्दतको लागि सामग्रीको दुई नयाँ मोड्युलहरू थपिएका छन्।
.6..6 कसरी व्यवस्थित तरीकामा विस्तृत सामग्री पोष्ट गर्ने?
तपाइँको सामग्री क्रमबद्ध गर्न, तपाइँ "विषयहरू" सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाइँका पोष्टहरूमा उनीहरूको फिचर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईका समूहका सबै सामग्रीहरूमा यी विषयहरू मार्फत फिल्टर गर्नका लागि। एक विषय सिर्जना गर्न, पर्दाको बीचमा "मोड्युलहरू चयन गर्नुहोस्" पढ्ने ठूलो निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
7.7 समूहमा पोष्टहरू कसरी पिन गर्ने?
तपाईंको समूह पोष्ट सिर्जना गर्दा, यो विशेष स्थिति दिनको लागि "पिन" मोड्युल छनौट गर्नुहोस् र तपाईंको समूहको स्ट्रिमको शीर्षमा पोष्ट हाइलाइट गर्नुहोस्।
8.8 कसरी मानिसहरूलाई मेरो समूहमा आमन्त्रित गर्ने?
व्यक्तिलाई तपाईंको समूहमा सिधा आमन्त्रित गर्न, "समूह URL" प्रतिलिपि गर्नुहोस् र व्यक्ति आमन्त्रित गर्न चाहानुहुन्छ पठाउनुहोस्। URL तपाईंको समूहको पृष्ठमा अवस्थित छ। तपाईंको स्क्रीनको माथि दायाँ सेक्सनमा हेर्नुहोस्, "सेटिंग्स" पट्टी मुनि। तपाईले आफ्नो समूहको नाम मात्र साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले आमन्त्रित व्यक्तिले तपाईलाई खोज बार प्रयोग गरी फेला पार्न सक्दछ।
9.9 म कसरी अन्य समूहहरू फेला पार्न सक्छु?
अन्य समूहहरू फेला पार्न स्क्रिनको माथिल्लो मध्यमा खोजी बारमा क्लिक गर्नुहोस् र खोजी सर्मा टाइप गरेपछि "समूहहरू" छनौट गर्नुहोस्।
10.१० के म निमन्त्रणा बिना समूहमा सदस्यता लिन सक्छु?
हो, तपाईं केवल खोजी पट्टी प्रयोग गरेर आफै यसलाई फेला पार्न र सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ।
.1.११ कसले र कसरी समूहको सामग्री शीर्षकहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दछ?
समूहको प्रशासक वा निर्माताले समूहको सामग्री शीर्षकहरू थप्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। त्यसो गर्न, केवल तपाईंको समूहको पृष्ठ खोल्नुहोस् र तपाईं आफ्नो समूह शीर्षकहरूको अवलोकन गर्नुहोस् यदि तिनीहरू अवस्थित छन्। स्क्रीनको "शीर्षकहरू" सेक्सनको शीर्ष दायाँ कुनामा, तपाइँले एउटा नोटप्याडको सानो छवि पाउनुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाइँ तपाइँका अवस्थित थिमहरू हटाउन वा तिनीहरूको नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ थिम थप्न तपाईंको अन्तिम शीर्षकको दायाँपट्टि प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
General। सामान्य प्रश्नहरु
.1 .१। के म धेरै प्रोफाइल दर्ता गर्न सक्छु?
होइन। बट्स, स्पाम, र अनुपयुक्त सामग्रीका अन्य प्रकारहरू देखा पर्नबाट जोगिनको लागि, हाम्रो प्लेटफर्मले वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै हिमस्वर लाभहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन। तपाइँ एक प्रयोगकर्ता को रूप मा, एकल पहिचान को लागी बहु खाताहरु दर्ता गर्न सक्नुहुन्न।
.2 .२। खातामा कसरी सदस्यता लिने?
खातामा सदस्यता लिनका लागि तपाईले प्रयोगकर्ता नामबाट दायाँ अवस्थित अवस्थित "सदस्यता" बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तपाईंले तुरून्त बेल बटनको नजिक आइकनको रूपमा नयाँ सदस्यताको सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरेर, तपाईंसँग सदस्यता बारे विस्तृत जानकारी हेर्न वा लुकाउने अवसर छ।
.3 ..3। कसरी अन्य प्रयोगकर्ताहरूको खाताबाट सदस्यता समाप्त गर्ने?
त्यहाँ अन्य प्रयोगकर्ताहरूको खाताबाट सदस्यता हटाउने दुई तरिकाहरू छन्:
१. तपाईको व्यक्तिगत प्रोफाइल मेनूमा जानुहोस्, त्यसपछि "प्रोफाइल" कोटीमा जानुहोस्, तपाईको आफ्नै खाताको फोटो नजिकै तपाईले दुई सूचीहरू पाउनुहुनेछ: "सदस्यता लिनेहरू" र "सदस्यताहरू"। "सदस्यताहरू" बटनमा क्लिक गरेर, तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको सूची देख्नुहुनेछ जसको खाताहरू अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ। सूचीबाट आवश्यक प्रोफाइल चयन गर्नुहोस् र "सदस्यता लिनुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईं यस खाताको अद्यावधिकहरू अनुसरण गर्दै हुनुहुन्न।
२. तपाईंले सदस्यता रद्द गर्न चाहेको व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुहोस् र "सदस्यता लिनुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
.4 ..4। कसरी मेरो खाताबाट लग आउट गर्ने?
तपाईको खातामा लग आउट गर्नका लागि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइल को सेटिंग्स मा जानु पर्छ पृष्ठको माथिल्लो दाहिने कुनामा बटनमा क्लिक गरेर सूचीको अन्त्यमा तपाईले "अन्य" कोटी र "लग" देख्नुहुनेछ। बाहिर "बटन। यसमा क्लिक गरेर, तपाईं आफ्नो प्रोफाइल छोड्नुहुनेछ। सबै कार्यहरू तपाइँको पृष्ठ र अन्य प्रयोगकर्ताहरूको पृष्ठ मा प्रदर्शनहरू सधैं बचत हुन्छन्।
.5।।। म मेरो खाताबाट लग आउट गर्न सक्दिन, मैले त्रुटि सूचना प्राप्त गर्दछु।
तपाइँको इन्टर्नेट जडान जाँच गर्नुहोस्। यदि समस्या बाँकी छ भने, कृपया हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
.6 ..6। कसरी मेरो खाता मेटाउने?
तपाईंको खाता निस्क्रिय गर्न, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइल सेटि to्हरूमा जानु आवश्यक छ। सेटि ofहरूको सूचीको अन्तमा, त्यहाँ एक बटन छ "प्रोफाइल मेटाउनुहोस्"। सावधान रहनुहोस्, तपाईंको प्रोफाइल र सामग्री सदाका लागि मेटिने छन्!
.6 ..6.१ के म अस्थायी रूपमा मेरो खाताको उपयोग निलम्बन गर्न सक्छु? होइन, तपाईं मात्र प्रोफाइल मेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं अनलाइन गतिविधिबाट ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ भने, केहि बेरका लागि खाताबाट लग आउट गर्ने विचार गर्नुहोस्।
.6 ..6.२ के मेरो खाता पुन: सक्रिय गर्न यो सम्भव छ यदि मैले यसलाई हटाउने बारेमा मेरो विचार परिवर्तन गरेको छु? होईन, खाता मेटाउँदा स्थायी रूपमा सबै प्रोफाइल डेटा नष्ट हुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्न।
.6 ..6.। के मेरो खाता स्थायी रूपमा मेटाउन सम्भव छ? हो। जब तपाईं खाता मेटाउनुहुन्छ, यो स्थायी रूपमा निष्क्रिय हुन्छ।